Iindleko yabasebenzi basoloko elibe pa kunzima ekunciphiseni ukuba umthengi
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Iindleko yabasebenzi basoloko elibe pa kunzima ekunciphiseni ukuba umthengi
■ Yiyiphi na ekuqaleni ukuya
emva kokuba zonke pa parlour yolawulo, kunye nokuncipha ibhola ngaphandle ukusuka kwiintengiso, kuba kutheni na iimfuno nkampani kuthatyathwe iindleko ezahlukeneyo.
Ngamanye amazwi, ukuba ukusetyenziswa kakhulu iindleko, uya kunqunyulwa nemali ukuze kuncitshiswa zibe yabathengi ukusuka imali kwiintengiso. Ngamaxesha anjalo, ukusebenza microphone Illuminations, umculo kunye ezifana, ukuze ukuyalela ukuba Ebubanzini kusenokwenzeka, masenze ngeke akucele. Ngenisa
isihloko, kodwa kukho iindleko zabasebenzi ukuba enye yezo akhawunti ubunzima enkulu kwamaxabiso Pachinkoya. Ekubeni uphuma kungenzeka ukuba akanako reduced intlawulo yabathengi apha kakhulu ukuba ukusebenzisa imali, kodwa kufuneka uhlole njengenye indicators.
iindleko zabasebenzi efanelekileyo, nesendlu pa, ngaba edingeka inani kakhulu abantu?
Iivenkile pa, kunye neevenkile sele liqalise inkqubo ukubala intlawulo ebizwa ngokuzenzekelayo inkqubo zobuqu, okanye abe bhokisi izaliswe ukubeka ibhola kwibhokisi dollar, xa uhamba ekhaya, cela ukuba ziphalale ngokuba umsebenzi okanye, inokubuyiselwa yahlulwe yaba pa parlour kwinkqubo yesiqhelo. Ethetha umsebenzi kubasebenzi
nesendlu pa eziye liqalise inkqubo lobuqu, iya kuba kuphela xa ekuqhubekeni ngokubanzi. Xa nesendlu pa bacinga esigxininisa nesevisi yabaxumi, thina ngoku zaziswa abaninzi. Xa iinkqubo zakho, abasebenzi, kunye patrol olunye beziphakamisile kakhulu siqithi, okanye isilumkiso ukuba akukho abathengi nokusola abanye, ukuba awunakuze kuphela malunga loo kunye pa umatshini wokucoca ukuba okanye impendulo yombuzo wakho. Ngenxa yokuba
, iza ukubeka ezintathu kwiiyunithi 300 emngxunyeni kubantu ababini. Ngaphezu koko, ngokuba umthengi ukuba senze konke ngokwakho, ulungile nale inani labantu, kungakhathaliseki msebenzi. Xa pa onendawo lentshayelelo kwenkqubo buqu, ukuba eli nani okanye ngaphezulu wabasebenzi, usenokuba iindleko kakhulu zabasebenzi.
_ x000D_ vice versa, kwi zegumbi pa evulekileyo kwinkqubo njengesiqhelo, kuba iye yaba kakhulu ukuba inani labasebenzi ezifunekayo. Nesendlu pa eziye liqalise inkqubo lobuqu, kuba imali yomsebenzi ukuza bonke ezahlukeneyo. Kwinkqubo eqhelekileyo, ukutshintshana cash lenkomo, umsebenzi edlula ibhola ibhokisi zeerandi counter jet, netafile zokusombulula, ukucocwa umatshini pa, siye inkxaso kubathengi kunye nomsebenzi ezahlukeneyo. Ekubeni uya kwenziwa kwi inkonzo
bonke abasebenzi, imveliso ukuba onyukayo, kuye abaqeshwa kuyimfuneko loo mali.
namhlanje, xa akuba kwanciphisa inani labasebenzi kuba nje lixesha free kunjalo, ukuba nawuphi na umsebenzi ithuba iba ngcono, inkonzo ayisekho ezingenalo apha kungekudala. Ukwenzela ukuphepha into enjalo, xa nesendlu pa ezithi uthatha inkqubo eqhelekileyo, ukuba kukho inani efakiweyo iiyunithi-300, ukusuka kubasebenzi abane emithandathu kufuneka ukuya emsebenzini yonke imihla.
oku, akukhathaliseki nokuba le nkqubo ungambandezanga imini ngaphandle ukubaleka, ze guquka.
Ngoko ke, nangona abasebenzi pa parlour eqhelekileyo nexesha anokubakho nkqubo, iza kuba yindlela kunye akukho zindleko zabasebenzi. Xa operation
ngemihla akukho nesendlu pa, Kakade kuba kananjalo ukuba kusetyenziswe iindleko zabasebenzi ayitsho ngokucacile, cinga jikelele. Ngale ndlela, isibakala sokuba ngaba uyasixhasa na okanye kukho ukusebenzisa kakhulu iindleko zomsebenzi, ziya kwahluka ngokuxhomekeke kwinkqubo intshayelelo.
Ukuba Kakare iindleko ezininzi zabasebenzi, ifuthe eza kuphuma imali encinane na, injalo loo nto. Okanye zegumbi pa ukuya nawe, nesendlu pa usebenzisa yabasebenzi nekukudlala ngemali iindleko, zama waphawula kancinane. Umsebenzi, netafile zokusombulula, ukucocwa umatshini pa, siye inkxaso kubathengi kunye nomsebenzi ezahlukeneyo. Ekubeni uya kwenziwa kwi inkonzo
Ukuba Kakare iindleko ezininzi zabasebenzi, ifuthe eza kuphuma imali encinane na, injalo loo nto. Okanye zegumbi pa ukuya nawe, nesendlu pa usebenzisa yabasebenzi nekukudlala ngemali iindleko, zama waphawula kancinane. It uya emsebenzini.
Ukuba Kakare iindleko ezininzi zabasebenzi, ifuthe eza kuphuma imali encinane na, injalo loo nto. Okanye zegumbi pa ukuya nawe, nesendlu pa usebenzisa yabasebenzi nekukudlala ngemali iindleko, zama waphawula kancinane.